Maxkamada Caalamiga ah oo yeelatay Madaxweyne cusub – Idil News
Maxkamada Caalamiga ah oo yeelatay Madaxweyne cusub
Posted By: Idil News Staff February 9, 2021
Maxkamadda Caalamga ah ee Garsoorka ICJ ayaa dooratay madaxweyne cusub oo xilka hayn doona saddexda sano ee soo socota, sida lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay Maxkamadda.
Madaxweynaha cusub ayaa ah gabadha xaakimka ah ee u dhalatay dalkan Maraykanka ee lagu magacaabo Joan E. Donoghue.
Xaakim Joan Donoghue ayaa xilkan kala wareegaysa xaakimka Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo u dhashay Soomaaliya. Xaakimka u dhalatay dalka Ruushka ee lagu magacaabo Kirill Gevorgian ayaa sidoo kale loo doortay madaxweyne ku xigeenka maxkamadda.
Maxkamaddan ayaa bisha dambe dhagaysan doonta kiiska badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dacwdadan ayaa dhagaysigeedu soconayaa inta u daxaysa 15-19 bisha Maarso ee soo socota.
Garsoorayaasha dawcaddan dhagaysan doona ayaa tiradoodu dhan tahay 15, waxayna kala yihiin: Joan E. Donoghue (Maraykan) Kirill Gevorgian (Ruush) Peter Tomka (Slovakia) Ronny Abraham (Faransiis) Mohamed Bennouna (Morooko) Antônio Augusto Cançado Trindade (Barazil)Cabdulqawi Axmed Yuusuf (Soomaaliya) Xue Hanqin (Shiinaha) Julia Sebutinde (Uganda) Dalveer Bhandari (Hindiya) Patrick Lipton Robinson (Jamayka) James Richard Crawford (Australia) Nawaf Salam (Lubnaan) Iwasawa Yuji (Japan) Georg Nolte (Jarmalka).